Mourinho Oo ‘Daqiiqad Kamid Ah 90-kii Daqiiqo’ Dusha Ka Saaray Guuldaradii Atletico
HomeChampions LeagueMourinho Oo ‘Daqiiqad Kamid Ah 90-kii Daqiiqo’ Dusha Ka Saaray Guuldaradii Atletico
Tababaraha kooxda Chelsea Jose Mourinho ayaa sheegay in daqiiqad kaliya oo uu ugu ‘Mid inkaari ku dhacday’ ay ahayd midii qiimaha ka qaaday kooxdiisa kulankii Semi finelka ee xallay kooxdiisu ku guuldaraysatay inay is hortaagto naadiga Atletico Madrid.
Atleti oo qarka u saaran inay hantido horyaalka la Ligaha ayaa markale u amba baxday Lisbon oo ay ciyaarta gunaanadka isku haleeli doonaan kooxda ay isku magaalada yihiin ee Real Madrid, kadib markii ay xallay naadiga Mourinho ee The Blues ku garaaceen Stamford Bridge kagana badiyeen 3-1.
In kastoo ay niyad jab weyn kaga tagtay, Mourinho – oo damacsanaa inuu noqdo tababarihii ugu horeeyey ee saddex kooxood oo kala duwan ku qaada Horyaalka Champions Leagu- wuxuu hambalyo u diray kooxdii ka badisay ee uu watay tababare Diego Simeone.
Isagoo ka sheekaynayaa sidii wax u dhaceen , tababare The Special 1, wuxuu ku yidhi warfidiyaha Sky Sports: “Ciyaarta marka laga reebo daqiiqad -baas- waxay ahayd mid dheeli tiran.
“Qaybtii hore waxay ahayd mid aanu anagu gacanta ku haynay, laakiin waxay ku dhamaatay 1-1, taas oo ah natiijo furan. Hal daqiiqo oo qaybtii dambe ah ayaa go’aamiyay dhamaan ciyaarta oo dhan.
“Goolwadaha Atletico ayaa badbaadiyey kubad aan macquul ahayn (madaxii Terry) Isla daqiiqadaas ayaa rigoodhihii ciyaarta dilay yimid. Ma garan karo inuu rigoodhe sax ah ahaa iyo in kale, Waan ka fogaa meesha lagu gallay.
“Daqiiqadaas ayaa ahayd mida inkaarta qabtay, 2-1 ay Atletico ku hogaaminaysay macquul ma ahayn, intaa wixii ka dambeeyeyna meesha hal koox uun baa ku ciyaaraysay – Kooxdii mooraalkeedu sareeyey, kana warqabtay ciyaarta oo nusa saace dhiman inay maamulaan oo natiijadana kala soo baxaan.
“Hambalyaan u dirayaa, maxaa yeelay waxay ahaayeen koox aad u heer saraysa, Spanish-ka dhexdiisa waxay ka samaynayaana waa arin la yaableh (hogaaminta horyaalka).”
Kompany Oo Khasab Lagaga Saaray Calaamadda Kabtanka iyo wejig Gabaxii Xalay
22/10/2015 Abdiwahab Ahmed
Arsenal Oo Dirqi Kaga Baxsatay Brighton
25/01/2015 Abdiwahab Ahmed
van Gaal: Axsaan Ayaan U Sameeyey Welbeck Markii Aan Ka Iibiyay Arsenal